Bambalwa bangase baziqhayise ngesimo esihle. Ungathukutheli, ngoba ungakwazi kalula ukufihla amaphutha kwezinye ukubukeka kwakho.
Ngakho-ke, kanjani ukufihla ukungaphumeleli kwesithombe ngaphansi kwezingubo?
Owesifazane ogcwele kufanele agweme izingubo ezihlukanisa isibalo ngokulinganayo. Ijackethi eqondile, ephela emgqeni we-hip, yenza ingxenye engezansi ye-light light, ifihla amaphutha we-figure. Futhi gwema izingubo eziqinile futhi eziqinile. Ukuqinisa ngokuqinile umbhande, awuyikufaka isikhumba esincane, uma kungenjalo, kodwa kugcizelela kuphela ukungabi khona kwesibalo. Ijaji elivulekile lizokwenza imigqa yokugqoka ingcono kakhulu.
Uma unobunjwa obuhle kakhulu, ungagqoki iziketi esikhwameni esisiyingiyingi, ukufaka ama-collars, amabhande amakhulu, ijazi kanye nengubo yemidwebo ehlukile, igqoke emaceleni amancane. Izindwangu emgodini omkhulu, inhlanganisela ehlukene yezimbali nama-hoodies amane enqatshelwe! Konke lokhu kugcizelela kuphela ukuphelela kwakho.
Gqoka ngokuqondile ukugqoka izingubo nge-neckline encane esifubeni nasemaphaketheni aqondile. I-skirt ne-blouse yombala ofanayo. Imibala ethandwayo: omnyama, ohlaza okwesibhakabhaka, ompunga, ogwadule. Ukukhetha izingubo zamathoni amnyama, ungakwazi ukufihla kalula ukushiyeka komuntu ngaphansi kwezingubo.
Izindwangu eziwela phansi ziyizinto ezifanelekayo kwabesifazane abanamafutha. Bengaziboni, bafihle ama-bulges amaningi futhi bashiye indawo yokucabanga. Ungakhohlwa ngamaketanga nobuhlalu obude - benza umphumela oqondile.
Isiyaluyalu somunwe omncane singadalwa ngengubo ngemininingwane ekhanda - amabhande, amabhande. Ama-silhouettes, afakwe noma afakwe kancane: uma eqhathaniswa nobubanzi be-hem, i-waistline izobonakala ibe mncane kakhulu. Ukuguqula ukunakwa kusuka okhalweni phezulu, udinga ukukhetha izingubo ezinezintambo eziyishumi ezinhlanu ezijulile ezijulile noma ezinama-heart.
Ukunciphisa ngeso lengqondo isisu kuzosiza ukugqoka ngezinqobe ezingenasimiso, iphunga noma izintambo ngakwesokunene, ziphazamisa ukunakwa. Izindwangu zidinga ukukhetha ezithambile noma ezifakiwe. Khetha amamodeli nge-sleeve ye-flashlight ukuze phansi kubonakale kuncane kunephezulu.
Uma unesivinini esikhulu kakhulu, kungcono ukugqoka izingubo. Ayikho imicibisholo nezinkinobho. Kuphela kwezingxenye ze-longitudinal kanye ne-decollete ehlanganisiwe. Uma i-bodice ivulekile kakhulu, kancane kancane umgudu ugcizelelwe. Izambatho ezinezimpande kanye nemigqa ebonakalayo zinciphisa ivolumu yayo, kuyilapho ubushebhezi bubenza umbukiso ubonakale. Gwema amamodeli nge-coquette ephela phezu komugqa wesifuba.
Izembatho ezithwanyelwe kanye nemininingwane eduze kwamathanga - ngokungafani ne-bust. Gqoka izinto kusuka ku-decollete, uhlakulele ama-clavicles, ikakhulukazi ama-triangular, kodwa lokho kuphelela phakathi nendawo yokuhamba. Khetha izindwangu ezinganamatheli, kodwa zilingane ncamashi.
Uma owesifazane enethanga elinzima, angazifihla uma efunda ukugqoka izinto ezifanele. Isiketi sokwahlukanisa sisiza ukufihla amaphutha futhi sibonise isithunzi salesi sibalo. I-hem, enqunywe emagumbini, igxila emadolweni amahle noma ama-ankles amnandi, ephazamisa izithanga ezinzima.
Isiketi esiqondile siyakwazi ukuhlobisa noma yikuphi ukuma, into esemqoka ukuthola ubude bakho. Amantombazane aphezulu avunyelwe ukugqoka iziketi ezinde, kwabesifazane abaphakama obude, abaqambi batusa iziketi ezithi "benga amadolo". Amafolda ahlongoziwe, izigxivizo eziqondile kanye namapokheji adiagonal zisebenza njengeziphazamiso. Indwangu ekahle yalolu hlobo iwuboya obuhle (inqwaba yesisindo esinzima isisindo).
Ungakwazi futhi ukugqoka iziketi ze-gypsy ezibanzi futhi ezimibalabala ngephethini eliphakathi. Isithombe esincane sizolahleka, futhi esikhulu sizokunikeza isibonakaliso esiningi ngokweqile. Esikhundleni sebhande le-raber noma ibhande elibanzi, isiketi se-gypsy sinomkhonto noma i-coquette, kuphela kulokhu isembatho siwela phansi, siceba amentimitha angaphezu kwalokho.
I-Trousers-Bedouins - ngqo kusuka emabhantshi okuqhaqha e-belt-kuliske yokuhlobisa. Le model ehlanganiswe ne-blouse ekhanyayo ibukisa isibalo. Isibhamu kufanele sigubhe izintambo kancane futhi singabi yi-baggy.
Izibhulu zabantu ziya kubo bonke abesifazane. Imigqa engaphelele yombalo abayenzayo kakhulu. Thatha izingalo zokugqoka izicathulo ezikhanyayo ngebhande namapokhethi, ezihambisana nemikhuba. Yenza okuthandayo kumabhantshi aqondayo, ama-hips we-weight and scans amancane. Awekho ama-tucks nama-cuffs okhalweni - abonakala ngokunciphisa imilenze.
Uma unemilenze emifushane, awukwazi ukugqoka izingubo nge-waistline ephansi, ungafaki i-blouse yakho esikhwameni; ukubonisana okungahambisani phakathi kwezinkalo. Hlanganisa ama-trousers avula isisu, futhi uboya ngamaphethelo uphenduke phansi. Khohlwa ngamabhuluki ancishisiwe kuze kube phakade.
Kungcono ukugqoka izigqoko nezingubo ezinezinwele ezigqamile, izinhlobonhlobo ezinezinwele ezingaphansi kwesifuba, iziketi zihanjelwe phansi, ama-blazing kanye namagqabhethi we-cut cut, ama-skirts ahlangene. Kuyinto efiselekayo ukukhetha izindwangu emgqeni oqondile nama-peas amancane.
Ukukhula okuncane akuyona inkinga. Vele ugweme ukugqoka izinto ezimibalabala futhi ezikhanyayo. Awudingi ukwandisa ukukhula ngenxa yezinwele zezinwele eziphezulu noma izigqoko ezihle. I-sole elikhulu kakhulu noma isithende esiphezulu kakhulu kuyokwenza ukuthi inani lingavumelani, futhi libukeka lingenangqondo. Ukuhleleka okuncane kakhulu kugcizelela kahle isithombe seThumbelina.
Ukwehlisa ngokweqile noma izinyathelo ezincane
Amantombazane amancane ayifuni ukugqoka izingubo eziqinile nezigqoke, agqoke izicucu ezijulile, agqoke ama-blades angenamikhono. Bheka okuhle kulezi skketi ezisezintambo eziyisiyingi, amabhande esikhweni noma ezinqulwini, ikakhulukazi ebanzi, amamodeli anezinhlamvu ezihlosiwe. Ukuqhaqhazela ngokubanzi, ukuqoqwa esikhwameni, imikhono. Khetha indwangu emgodini omkhulu noma imbali enkulu.
Izindebe ezinamahlombe namahlombe avulekile angabheka abesifazane abaningi, uma ugqoka izingubo, i-jumper, ihembe, iziqongo, isibalo esiqinile. Futhi ufihle amaphutha azosiza iziketi eziphethe amafolda athambile noma i-basquel okhalweni. Ama-silhouettes, anciphise phansi, awuhambanga.
Izinwele ezimfushane zokweba izinwele ezinomzimba omncane - izitayela zemfashini 2016
Isitayela seBoho sokuqedela
Ukudla kweqembu lokuqala legazi
Impilo yakhelwe ukuqonda, udinga ukuthethelela
Amazambane angama-zrazy ngenyama
Amaqanda aqhekekile e-tortilla
Yini ongayenza nengane?
Yisiphi i-sauna eshisa amafutha kangcono
Amabhisikidi we-Chocolate nama nati
Islazi saseScotland: ubufakazi, inzuzo, ukuphikisana